Romafo 10 NA-TWI - Gyidi ne bɔneka - Anuanom, nea me koma - Bible Gateway
Romafo 9Romafo 11
Romafo 10 Nkwa Asem (NA-TWI)
10 Anuanom, nea me koma pere hwehwɛ yɛ me mpae a mebɔ srɛ Onyankopɔn ma Israelfo sɛ wobenya nkwagye. 2 Metumi madi wɔn ho adanse sɛ wɔyɛ nnipa a wɔde mmɔdenbɔ som Onyankopɔn sɛnea ɛsɛ. Nanso wɔn som no mfi nimdeɛ mu. 3 Wɔammu trenee a efi Onyankopɔn no na mmom wɔpɛe sɛ wɔfa wɔn ankasa nimdeɛ so. Eyi amma wɔamfa wɔn ho anhyɛ Onyankopɔn pɛ a ɔnam so ma onipa wie pɛyɛ no ase. 4 Kristo abesi mmara no ananmu na obiara a ogye no di no dan ɔtreneeni.